बाबुरामको विरुद्धमा विषवमन | eAdarsha.com
बाबुरामको विरुद्धमा विषवमन
१. आफूलाई वाम बुद्धिजीवी भन्ने केहीले शनिवार एक वक्तव्य जारी गर्दै गोर्खा-२ बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको तीव्र आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले डा. भट्टराईलाई “अवसरवादी” भन्दै चुनावमा अवसरवादीलाई चिन्न गोरखाका पारखी जनतालाई अपिल गरेका छन्।
२. अपिलमा डा. भट्टराई मार्क्सवादी विचारधाराका पक्षधर नरहेका मात्र होइनन् , उनलाई सिद्धान्तहीन अवसरवादी समेत भनेका छन्। उनीहरूले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा एक जना उम्मदेवारको विपक्षमा यस्तो विषवमन किने गरे, त्यो रहस्यमयी भएको छ। कतै उनीहरूलाई आफनो पक्षका उम्मेदवारले हार्ने संकेत पाएकाले यस्तो वक्तव्य जारी गरेका त होइनन् –
३. गोरखा-२ बाट नयाँशक्तिका संयोजक डा. भट्टराईको विरुद्धमा एमाले-माओवादी केन्द्रका गठबन्धनबाट केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ उम्मेदवार भएका छन्। गोरखा-२ को त्यो क्षेत्रबाट यसअघि पनि डा. भट्टराईले जितेकाले त्यो उनको क्षेत्र भनेर चिनिन्छ। यस पटक डा. भट्टराई काँग्रेससँग तालमेल गरेर उम्मेदवार भएका छन्।
४. गोरखाको त्यो क्षेत्र चुनावको दृष्टिले सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको छ र त्यसले सबैको ध्यान आकषिर्त गरेकेा छ। सञ्चार माध्यममा पनि त्यो क्षेत्र चर्चित भएको छ। यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आफ्नै पक्षकाले जितोस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ। वाम बुद्धिजीवीहरूको पनि त्यो चाहना हुनु स्वाभाविक हो। त्यही चाहनालाई वैतरणी तार्न यो वक्तव्य जारी गरेको अनुमान छ।
५. जहाँसम्म सिद्धान्तवादी र सिद्धान्तहीनको कुरा छ, नेपाली राजनीतिमा खास सिद्धान्तवादी पाउनु बालुवामा सुन खोज्नु जस्तै हो। यहाँका पारखीहरू कम्युनिष्टहरू कम्युनिष्ट जस्ता छैनन्, नकि प्रजातन्त्रवादीहरू प्रजातन्त्रवादी जस्ता छन् भनी शिकायत गरेको बराबर सुनिन्छ। ती दुवै स्वार्थी छन् र स्वार्थका लागि जे पनि गर्दछन् भन्ने आरोप उनीहरू माथि छ।
६. जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा छ, विगत दश वर्ष यताको उनीहरूको गतिविधि हेर्‍यौँ भने सबै पार्टीे गठबन्धन गरेका छन्। आफूसँग गठबन्धन गरे पवित्र, अरुसँग गरे अपवित्र भन्ने उनीहरूको स्वार्थ हो। हिजो स्थानीय तहको चुनावमा पनि प्रायः सबैले सबैसंग गठबन्धन गरेका थिए।
७. यस्तो स्थितिमा केही स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरूले डा. भट्टराईमाथि सिद्धान्तहीनताको आरोप लगाएका छन्। यस्तो आरोप चुनावको पूर्व सन्ध्यामा गरिनु के कति आवश्यक छ र औचित्य छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। कतै यस्तो आरोप लगाउँदा बुद्धिजीवीहरूको बुद्धि ह्रास भएर त होइन भन्ने कुरा पनि छ। हाम्रो नीति वाक्य “जहाँ नपुगे रवि, त्यहाँ पुगे कवि” भन्ने छ। कतै हाम्रा बुद्धिजीवीहरूलाई नारायणकाजी श्रेष्ठको पराजयको पूर्व अनुमान भएकोले २/४ भोट भए पनि बढोस् भनेर आत्तिएर त्यो वक्तव्य जारी गरिएको त होइन भन्ने अनुमान पनि छ।